‘दासढुंगा’को दोस्रो भाग बन्ने, खोजिने छन् यी कुरा ! « रंग खबर
रंगखबर, काठमाडौँ – सन् २०१० मा रिलिज फिल्म ‘दासढुंगा’को दोस्रो भाग ‘दासढुंगा – च्याप्टर २’ निर्माण हुने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ‘एमाले’का तात्कालिन महासचिव मदन भण्डारीको मृत्युमा आधारित फिल्मको थिम पोस्टर पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
थिम पोस्टरले ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीति र दर्घटना’को विषयलाई केलाउने भाव व्यक्त गर्छ । फिल्मबाट दासढुंगा’ हत्या हो कि दुर्घटना हो ? भन्ने प्रश्नको चिरफार निर्माता अपिल विष्टले बताएका छन् । स्क्रिप्टका लागि अहिले अनुसन्धान भैरहेको छ । जहाँ दासढुंगा काण्ड पछि त्यसले प्रत्यक्ष असर पारेका क्षेत्रको कथालाई पनि फिल्ममा समेटिने छ ।
‘दासढुंगा’लाई मनोज पण्डितले निर्देशन गरेका थिए । भने, भाग २ को लेखन र निर्देशक कुमार भट्टराईले गर्नेछन् । फिल्मको लागि अहिलेसम्म कुनै पनि कलाकार तय भैसकेका छनन् । नयाँदेखि पुरानासम्मको अभिनय रहने कलाकार हप्ता दिनमा फाइनल हुनेछन् ।
‘दासढुंगा’मा सौगात मल्ल, अनुप बराल, संचिता लुइँटेल, दयाहाङ राई, विश्व बस्नेत, बिएस राणा, रामशरण पाठक, डा, केपी भण्डारीलगायतको अभिनय थियो ।